Tanora tsy tara – Scooter : miverina indray ny “courses sauvages” | NewsMada
Tsy mety fay. Efa matetika mamoa-doza ny scooter eto amintsika, maro koa anefa ireo mpilalao scooter tsy mivaky loha amin’izany. Miverina indray mantsy ny “courses sauvages” eo amin’ny môtô scooter.
Tsy ara-dalàna. Efa nandraisana fepetra tany aloha ny fanaovan’ireo mpilalao môtô scooter fifaninanana tsy ara-dalàna. Nihalefy tsikelikely anefa ilay fepetra ka nampirongatra indray, tao anatin’ny fotoana vitsy, ny fanaovan’izy ireo fifaninanana tsy ara-dalàna na ilay atao hoe “courses sauvages”.
Mifamotoana amina toerana iray ireo mpanamory môtô scooter ka mandeha avy hatrany ny fanentanana sy ny fihantsiana eo amin’izy ireo ary dia raikitra ny “courses” avy eo. Raha ny zava-misy amin’izao fotoana izao, etsy amin’ny Marais-Masay, izy ireo no mifanao fotoana isaky ny alahady. Vory scooter eny an-toerana rehefa alahady hariva iny ka mifampihantsy ireo samy mpanamory hanatanterahana ilay “courses”.
Antony iray tena mahasarika ireo mpilalao môtô scooter amin’ity “courses sauvages” ity ny fisian’ny ady vola. Eo ihany koa anefa ny mifampidera amin’ny tanjaky ny môtô-ny tsirairay avy. Tsirony ho azy ireo mantsy ny tanjaky ny môtô-ny hahazoany mitandroka ny hafa izay mitovitovy amin’ny azy.
Ankoatra izay, tsy fantatr’izy ireo anefa ny loza mety haterak’ity “courses sauvages” ity sy ny sazy mety hahazo azy amin’izany. Loza mananontanona ny fifamoivoizana satria na ireo mpampiasa iny lalana amin’ny Marais-Masay iny aza miferinaina sy lasa mihafihafy. Ary ny tena goavana dia matetika, rehefa ho avy izay ny loza, mipaka tampoka any amin’ireo tsy manan-tsiny ilay hadalana. Marihina anefa fa efa misy ny toerana voatokana azon’izy ireo hanaovana ireo fifaninanana fa tsy eny an-dalambe fampiasam-bahoaka.
Aiza ho aiza ny fandraisan’andrikitry ny mpitandro filaminana amin’ity “courses sauvages” miverina indray eto amintsika ity? Andrasana ny fandraisan’andraikitr’ireo tompon’andraikitra isan-tsokajiny.